भाषा बचाऔं – bampijhyala.com
Home > बिचार दृष्टिकोण > भाषा बचाऔं
१० आश्विन २०७७, शनिबार १२:३३ bampijhyala
अध्यक्ष, नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दवु केन्द्रीय समिती
अरु विभिन्न भाषाको प्रभाव बढ्न थालेपछि अहिले नेपालको सम्पर्क भाषाको रुपमा देखिएको खस नेपाली भाषाको प्रवाहमा संकुचन त ल्याउने होइन, अरु भाषाको माझ कम प्राथमिकतामा पर्ने त होइन । यस्तै चासो ब्यक्त गर्ने भाषासेवीहरुको आवाज सुनिएको पनि लामो समय भइसक्यो । शुद्ध र प्रविधिमैत्री भाषाका रुपमा विकास गर्ने प्रयास निरन्तर हुनुपर्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराउने यो आवाजकै बीचमा धेरै मधुरा आवाजहरु लामो समयदेखि गुञ्जिरहेको भने सुनिएको छैन ।
विभिन्न भाषाभाषीका यी आवाजहरु राज्यको कानसम्म पु¥याउने प्रयास आजको कुरा होइन । दशकौं देखि शताब्दीसम्मको अवधिदेखि यस्तै प्रयासहरु भइरहेका छन् । जसमा नेपालभाषा र नेपालभाषा आन्दोलन प्रमुख एवं नेतृत्व गरेको भाषा एवं आन्दोलनका रुपमा मनन हुँदै आएको छ । राज्यले संरक्षण एवं प्रयोगमा गम्भीर भएर नसोचिदिएको मात्र होइन, अझ भाषा दमकै नीति समेत लिएका कारण सम्पूर्ण मातृभाषीहरुको मन दुखेको छ ।
नेपालभाषामा लेखिएका पुस्तक जफत हुने समयदेखि जबरजस्ती एक भाषा एक संस्कृति नीति कडाइका साथ लाद्ने सम्मको कार्य राज्यबाटै भयो । त्यो विगत फेरिनु पर्छ भन्नेहरुलाई बल दिने कार्य पनि गरे विभिन्न भाषाभाषी समूहले विश्वासका साथ । आज देशमा परिवर्तन भएको छ तर के फेरिएको छ त भाषाभाषीका हकमा, भाषा संरक्षण, विस्तारका विषयमा !
अझ आज त यो प्रश्न सोध्नलाई कुनै अपरिचित राज्यसँग पनि प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था छैन । आफ्नै माटोमा हुर्केका ब्यक्तिहरु जनप्रतिनिधिका रुपमा नेतृत्वमा छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका र धनुषा जिविसमा स्थानीय भाषालाई दिएको मान्यता रोक्ने सर्वोच्चको आदेश दुःखद् इतिहासका रुपमा बिर्सनेतर्फ प्रेरित नभइ प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा हालसम्म पनि किन कार्यान्वयनमा छ । बल गरेर रोक्ने मनसाय पाल्नेहरु अझै किन बलियो छ ? यसको जवाफ खोज्दा फरक खालको अनुभव पनि आउने गर्दछ । बल गर्नेले बल गरुन्जेल हाम्रो विद्रोहको शक्ति पनि देखियो र समाजमा संरक्षणमा पनि उर्जा रहिरह्यो । आज बल गर्नेहरुको मनसाय यथावत् छ तर विद्रोह गर्नेहरु पनि शक्तिमा पुगेका कारण विद्रोह शिथिल भयो । जसकारण समाजमा संरक्षण र ब्यापकताको उजौ पनि शिथिल भएको छ । यो शिथिलता सबैभन्दा खतरनाक छ । हाम्रो भाषा लोप हुनुको कारक हामी पनि बन्दैछौं आजको समयमा ।
नेपालभाषा लगायतका विभिन्न भाषा संरक्षणको कुरा गरिरहँदा नेपालभाषाभित्र पनि विभिन्न स्थान विषेशमा बोलिने विशेषतायुक्त भाषाहरुप्रतिको चासो पनि उत्तिकै रहने गर्दछ । केही दुरी, फरक वस्ती, जीवनशैली फरक । संस्कृति, संस्कार, परम्परा फरक भए जस्तै भाषामा पनि त्यो परिवर्तन नेवार समुदायको विशेषता हो । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरबीच भाषिक भिन्नता हाल विशेषताकै रुपमा ब्याख्या हुने गर्दछ र आफ्नोपन, शैलीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने बुझाइ धेरैको छ ।
विगतमा जस्तो एक स्थानका वासिन्दासँग अर्को स्थानका वासिन्दाले नेवार नै भइकन पनि नेपालभाषामा कुरा नगरी अन्य भाषाको सहारा लिनु पर्ने अवस्था परिवर्तन हुँदैछ । संचारमा समेत एउटा निश्चित संचारका लागि भाषा भन्ने मान्यता पुरानो भएको र सबै भाषाशैलीहरु अटाउन थालेका छन् । स्थानीय शैलीहरु संचार माध्यममार्फत प्रवाह हुन थालेपछिको अर्को सहज परिवर्तन हो यो ।
यही बीच नेपालभाषा भइकन पनि नेवार समुदायकै अन्य स्थानका वासिन्दाहरुको लागि सँधै बुझ्न चुनौती बनेको भाषा हो दोलखाली नेपाल भाषा । अड्कन समेत पनि काट्न नसकिने भाषा विस्तारमा चुनौती अझ बढ्छ । तर यो अवस्थामा चुनौती भन्दा पनि सोही भाषा जाती भित्र बाँच्नु पर्ने अनिवार्य रहन्छ । जसका लागि समाज, राज्यको जिम्मेवारी अवश्य छ । यही जिम्मेवारी सम्झाउन पनि सोही भाषा जातीको झकझक्याइ निरन्तर आवश्यक रहन्छ ।
यही जिम्मेवारी साथ बापिझ्याला निरन्तर छ । नयाँ आयामका रुपमा अनलाइनको शुरुवात अर्को उपलब्धि हो । यो उपलब्धि सम्पूर्ण दोलखाली नेवाः जातीको होस् र यसबाट संसारैभरी लाभ पुगोस् यही शुभकामना साथ कलम रोक्दैछु ।
बिचार दृष्टिकोण भाषा/ संस्कृती
नेपाल भाषाय नामजाउ उपन्यासकार भाजु राज सायमिय पामिला अडियो साफर चल्केर्जु
कोविड विरुद्ध लड्न थप ३ वटा अस्पतालसँग काठमाडौँ महानगरको सहयोग सम्झौता अहिलेसम्म १२ वटा अस्पतालसँग सम्झौता १० आश्विन २०७७, शनिबार १२:३३
नेपाल सुपर लिगको उपाधि काठमाण्डौंलाई १० आश्विन २०७७, शनिबार १२:३३
कोरोना संक्रमणबाट विगु गाउँपालिकामा एक बालकको मृत्यु १० आश्विन २०७७, शनिबार १२:३३
८ हजार ४६ थपिए, ५ हजार ४५५ कोरोनामुक्त, १८७ को मृत्यु १० आश्विन २०७७, शनिबार १२:३३
आज ललितपुरको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तानियो १० आश्विन २०७७, शनिबार १२:३३